Iyo nyowani vhezheni yeElectron 4.0.0 yakatoburitswa kare | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi ivo vanogadzira chirongwa che electron vakazivisa kuwanikwa kweshanduro nyowani yeElectron 4.0.0 uye nezvavanovavarira kupa yakazvimiririra hurongwa hwekuvandudza muchinjika-chikuva mushandisi mashandisiro, uchishandisa Chromium, V8 uye Node.js zvinhu.
Vagadziri vanokwanisa kuwana maNode.js mamodule pamwe neIPI yepamberi yekugadzira mabhaisikopo emuno, kusanganisa mashandisiro, kugadzira mamenu ezvinyorwa, kusanganisa nehurongwa hwekuratidzira zviziviso, kushandisa windows, uye kusangana nehurongwa hweChromium.
Kusiyana newebhu-based application, maElectron-based zvirongwa zvinounzwa semafaira akapatsanurwa anoita asina kubatana nebrowser.
Mune ino kesi, iye anovandudza haafanire kunetsekana nezve kuisa chikumbiro chemapuratifomu akasiyana, Electron ichapa kugona kuumbiridza kune ese maChromium anoenderana masisitimu.
Electron inopawo maturusi ekuronga otomatiki kuendesa uye kuisirwa kwemishumo. (Zvidzoreso zvinogona kununurwa kubva kune yakazvimiririra sevha kana zvakananga kubva kuGitHub.)
Pamapurogiramu akagadzirwa pahwaro hwepuratifomu yeElectron, tinogona kutaura:
Iyo Atom mupepeti
Iyo Nylas email mutengi
Maturusi ekushanda neGitKraken
Iyo Wagon SQL kuona uye kuongorora system
Iyo WordPress Desktop blogging system
Iyo WebTorrent desktop BitTorrent mutengi
Kurerutsa kuvandudzwa kwemashandisirwo matsva, seti yemhando dzekushandisa demo dzakagadzirirwa, kusanganisira kodhi yemuenzaniso kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana.
Muchikamu chitsva ichi cheElectron 4.0.0 zvimwe zvinhu zvitsva zvakawedzerwa pamwe nekugadziriswa uye kugadzirisa kukodhi yeprojekti.
Zvimwe Imwe yeshanduko yakasimbiswa nevagadziri mune ino nyowani yekuburitsa iri muBrowserWindows kirasi uye iyo webview tag.
Izvo, nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedzeka kukuru, kugona kudzima »kure« module yawedzerwa, iyo inomiririra iyo IPC mashandiro ehukama pakati pekushandurwa kwenzira yazvino peji uye yakakosha maitiro
Uye zvakare, rutsigiro rwakawedzerwa rwekusefa zvikumbiro remote.require () uye remote.getGlobal () kuti uwane kutonga kuzere pamusoro pekuwana kwemamojuru kuIPC, iyo inogona kubatsira kana iwe usiri kuda kuremadza zvachose module iri kure panguva yekupa maitiro kana mukutarisa kwewebhu.
Imwe shanduko yakaitwa kuratidza iyi pani, ikozvino unogona kushandisa kufona kuapp.showAboutPanel (), iyo kuurayiwa kwakafanana nekudzvanya pane inoenderana menyu.
Pakati peimwe shanduko dzinogona kusimbiswa mukuburitswa kutsva kweElectron 4.0.0 yatinowana:
Iyo setBackgroundThrottling () nzira yakawedzerwa, iyo inobvumidza iwe kudzora on uye off yeiyo nzira yekudzora chiitiko chekugadzira zviitiko zvenguva uye kudhirowa mifananidzo ye windows inomhanya kumashure.
Yakachinja iyo yekuvhura yekuvharira michina kweanopfuura imwechete chiitiko chekushandisa. Kuti usete iyo Lock pane app.makeSingleInstance (), iwe unofanirwa kushandisa iko app.requestSingleInstanceLock () kufona.
Yakachinja default kukosha kwekumisikidza: mamiriroIsolation = ichokwadi, nodeIntegration = nhema, webviewTag = nhema.
Iwo maNode.js maturu ekubatanidza emahwindo muNativeWindowOpen modhi akaremara (chimiro ichi chakambodzorwa).
Tsigiro ye macOS 10.9 (OS X Mavericks) yamiswa.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve shanduko uye ruzivo rweiyi nyowani kuburitswa kweElectron 4.0.0 unogona kushanyira chiziviso chepamutemo chinowanikwa pane Electron blog. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo itsva vhezheni yeElectron 4.0.0 yakatoburitswa
Luster, imwe yemafaira masisitimu anoshandiswa mumasumbu uye makomputa makuru